100th Post | The World of Pinkgold
Posted on January 11, 2008 by cuttiepinkgold
ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်လေးကို 2007 ခုနှစ် August လရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ စတင်ရေး သားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်နေ့ရယ် လို့တော့ ကျွန်မသေချာ မှတ်မထားမိပါဘူး။ ပို့စ်စတင်တဲ့ရက်ကို ပြန်လိုက်ရင် ရပေမယ့်လို့ ကော်နက်ရှင် အခက်အခဲကြောင့် ကျွန်မလည်း ပြန်ရှာ မနေချင်တော့ဘူးရှင့်။ ထားပါတော့လေ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီအချိန်လေးက နေပြီး ကျွန်မဘလောဂ့်ရေး ဖြစ်ခဲ့တာ ခုဆိုရင်6လနီးပါးတောင် သက်တမ်းကြာရှည်နေပြီး ဒီပိုစ့်လေးဟာ ကျွန်မရဲ့ ပိုစ့် 100 မြောက်ရေးသား ချက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရလေး အနေနဲ့ ကျွန်မ ထူးထူးခြားခြားလေး ရေးပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မပဲ စိတ်ကူး စိတ်သန်း ညံ့ဖျင်းတာလားတော့ မသိဘူးရှင့် ဘာအကြောင်းကို ဘယ်လို သီကုံးရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မစဉ်းစားလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ပိုစ့်100 မြောက် အနေနဲ့တော့ ကျွန်မ တစ်ခုခုကို ကြိုးစားရေးပေးမှာပါ။
စစချင်း အနေနဲ့တော့ ဒီဘလောဂ့်လေးကို ရှင်သန်အောင် အသက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဟာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (အမ်.. မယ်ပင့်ဂိုလ်း.. တစ်မျိုးပါလား ဟိ)။ နောက်တော့ ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်ဖတ် ပရိတ်သတ်တွေ၊ ပုံမှန် အားပေးနေကျ ဘလောဂ့် လောကမှ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ သူတို့တွေသာ မဖတ်ရင် ကျွန်မ ဘယ်လောက်ရေးရေး ဒီဘလောဂ့်လေး အသက်ဝင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို နည်းပညာပိုင်းမှာ ကူညီပေးခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းများ၊ ဘလောဂ့်လောကမှ စီနီယာ များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလေးစား အားကျ အတုယူရတဲ့ ဘလောဂ့်များ ဖြစ်တဲ့ ကိုရန်အောင်၊ မလေးအိမ့်၊ ကိုညီလင်းဆက်၊ ကိုကောင်းကင်ကို၊ ကိုမင်းတစေ၊ မမမယ်လိုဒီ၊ ကိုနေဘုန်းလတ် စတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေကိုလည်း လေးစား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေရှင်။ ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်လေးကို ကျွန်မဂျီကျတိုင်း တစ်ခုခုပြောင်းလဲ လုပ်ချင်တိုင်းမှာ မညည်းမညူ ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြသော ကိုထိုက်၊ ကိုဇေယျာ၊ မိုးတိမ် စတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ MBS မှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှားပေးတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ.. စာရေးဖို့ အိုင်ဒီယာ မရတိုင်း ကျေးဇူးပဲ လိမ့်တင်နေတာ ခုတော့ အတွေးတစ်ခု ထွက်လာပြီရှင့်.. Yo Yo!
Pinkgold on January 11, 2008 at 6:35 am said:
comment တွေကို ပိုစ့်မှားရေးကြတယ်ဗျို့ အပေါ်မှာပါရှင် တည်နေရာက
giant_kicker on January 11, 2008 at 6:58 am said:
ယောက်ျားလေးတွေရော လျှောက်လို့ ရလား မသိဘူးနော်။ ငါက ဆယ်တန်းတော့ အောင်ထားပါတယ်။ 🙂
Ashin Kumara on January 11, 2008 at 7:18 am said:
ငါ့ကိုလည်း အင်တာဗျူးပါဦးဟ..ဖြေချင်လွန်းလို့…မမေးဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်မေး ပြီး ပြန်ဖြေမှာနော်..
၁၀ တန်းအောင်ပြီး ပီလား…ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစာသင်ရတာ ဘယ်ကလာအတန်းတက်ရမှာလဲ..
စိတ်ဝင်စားသမှ . အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်….
.အတန်းကျောင်းမနေရလို့ အားမငယ်ပါဘူး။ ပီမိုးနင်းက
ခြုံကြားမှာနေပေမဲ့ စိတ်က ၀တိံဘုံဖျားလောက်မြင့်
ထားတယ်။ ဒူးလောက်မှန်းမှ ရင်လောက် ကျမှာ (ရင်
လောက်မှန်းမှ ဒူးလောက်ကျ ဆိုတာ မဟုတ်) မဟုတ်
လား။ ဒါကြောင့် ဒီမှာသာ အလုပ်ရရင် ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်
အတွင်း ပါတနာ.ဒါမှမဟုတ် ဘော့စ် ဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်း
Pinkgold on January 11, 2008 at 7:55 am said:
ပြီးတော့ တပည့်တေည် ပြောတာက 10 တန်း အောင်ခြင်း မအောင်ခြင်းထက် ဘ၀မှာ ရည်မှန်းချက် ကောင်းကောင်း မထားကြတဲ့ လူငယ်တွေကို ပြောချင်တာပါ ဘုရား လာရောက် ဖတ်ရှုပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရား
ကောင်းကင်ကို on January 11, 2008 at 8:39 am said:
အမတို့ မြန်မာပြည်မှာ အဝေးသင်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကို 10 ရက်လောက် ကျောင်းတက်ရုံနဲ့ ဘွဲ့ရဖြစ်တယ်။
10 ရက်ကြီးများတောင် တက်ရသလား။ အဟီး။
linoo2007 on January 11, 2008 at 10:43 am said:
ကျွန်တော်လည်း လာလျှောက်ပါဦးမယ်…ယူထားတဲ့ဘွဲ့နဲ့ အရောင်းစာရေးနဲ့တော့ မကိုက်ဘူး….
ခန့်၇မယ် .. ဒါပဲ..
phoethutaw on January 11, 2008 at 12:09 pm said:
၁၀ရက် ၃ခါလောက်တက်ရင်ရတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ သဘောပါ။ ဘွဲ့ရထားတော့လည်း ပိုပြီး အသိကျယ်တာပေါ့လေ။ လူငယ်တွေကော မငယ်တငယ်တွေကော ကြိုးစားနိုင်ပါမှ..ကိုယ့်အတွက်ကော တိုင်းပြည်အတွက်ပါ ကောင်းနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုစာမျိုးလေးတွေ များများရေးပါ။ အားပေးနေပါတယ်အမ။
phoethutaw on January 11, 2008 at 12:15 pm said:
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီခေတ်မှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် အခြေခံပညာအထက်တန်းတော့ အောင်သင့်ပါတယ်။ဘွဲ့ကတော့ ဘွဲ့ပေါ့ဗျာ.
pandora on January 11, 2008 at 2:24 pm said:
ပင့်ဂိုးလ်ခေါ် လော်ရာ ခေါ် ထက် ခေါ် (ပင့်ကူတို့ ပန်းရွှေတို့တော့ မပြောပါဘူး လို့) အလှကြိုက်တဲ့ ဘလော့ဂါလေး ပို့စ် ၁၀၀ မှသည် ပို့စ် ထောင်သောင်းများစွာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆက်ရေးသွားနိုင်ပါစေ လို့
ဇနိ on January 11, 2008 at 2:48 pm said:
၁၀၀ မှသည် ထောင်သောင်းချီ …
Ka Daung Nyin Thar on January 11, 2008 at 4:29 pm said:
ဟဲ့ ပန်းရွှေဆိုတာ နာ ပေးတဲ့ နာမည်လေ မှတ်မိလား။
ပင့်ဂိုးလေးက အရမ်းကို အတွေးအခေါ်တွေ တိုးတက်နေပါလား။ ကောင်းသော အနာဂတ်ပါကွယ်။ သို့သော် အင်တာဗျူးမေးခံရတဲ့ ကောင်မလေးကို သနားမိတယ်။ သူ့ခမျာ တိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းတွေ ပိတ်ခံနေရရှာတော့ တိုးတက်အောင် မလုပ်တတ်တော့ဘဲ လေနေတာပါ။ အဲဒါ စာကို စိတ်မ၀င်စားရတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ့။
ဒီလို ပင့်ဂိုးရဲ့။ ငါ ဖတ်ဖူးတာမှာ လူမှာ choice နဲ့ variety ဆိုတာ ရှိတယ်တဲ့။ ရွေးချယ်မှု နဲ့ ဘယ်လောက်များများ ရွေးချယ်နိုင်လဲဆိုတာရယ်ပေါ့။ သူ့ခမျာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းကို မဆုံးဖြတ်တတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးကို ပင့်ဂိုးလ်လေးများ တွေ့ရင် တရားချ လွှတ်လိုက်ရမယ်။ ဒါဟာ လူတယောက်ကို ကယ်တင်တာပဲ။
စကားမစပ် ငါပြောရဦးမယ်။ တလောက ရန်ကုန်က housing ဆင်းမယ့် ဆရာဝန်လောင်းလေး လာလည်တယ်။ သူ့က ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးရင် ဘယ်နိုင်ငံ သွားလုပ်ရမလဲပေါ့။ ဘယ်လို အနာဂတ်ရယ်ပေါ့။ သူ့ကို စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အဲဒီ ဆရာဝန် ဘွန်း ပြီးရင်ထင်တာပဲ။ ဦးလေးတွေက ပြောတယ်။ ငါက ပြောတယ်။ မင်း စင်္ကာပူ မလာနဲ့။ အင်္ဂလန်ကို မင်းအမေ လွှတ်ပေးနိုင်တာပဲ။ F.R.C.S ဆက်တက်တာ မင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဖို့ ပိုကောင်းတယ်လို့။ မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်က စင်္ကာပူလာရင် ဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လဲ။ အင်္ဂလန်မှာ ပညာဆက်သင်ရင် မြန်မာပြည်အတွက် အနည်းဆုံး ဆရာဝန်ကြီး တယောက် ရသေးတယ်။ မြန်မာပြည် မပြန်ချင်တောင် အင်္ဂလန်က ဘွဲ့နဲ့ ပိုတောင် လူဝင်ဆံ့သေးတယ်။ အင်္ဂလန်ကို try ဖို့တော့ ရုန်းကန် ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားပဲကွာ။ ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်။
တကယ်က လူတယောက် ကြိုးစားချင်လာအောင် motivation ဆိုတာလိုတယ်။ ဒီ motivation ဆိုတာကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ environmental factor တွေဟာ (၁) အခွင့်အလမ်းများ (၂) မိဘ (၃) စာအုပ် (၄) မိတ်ဆွေကောင်း တွေ ဟာ အင်မတန် အရေးကြီးတယ်။ ဒီမှာ ပြောလိုတာက အခွင့်အလမ်းတွေ မရှိဘဲ လူဟာ မကြိုးစားချင်ဘူး။ အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖွင့်ပေးနိုင်တာ ဘယ်သူလဲ။ နင်သိပါတယ်။ ငါပြောစရာ မလိုဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ လူတွေ မလေးရှားထွက်ကြ၊ ထိုင်းထွက်ကြ။ ငါကော ဘာထူးလဲ။ စင်္ကာပူ ထွက်လာသေးတာပဲ။
ကဲ ဒီလောက်ဆို တော်လောက်ပြီ။ ငါ နင့်အတွက် ၀မ်းသာတယ် တကယ်ပြောတာ။ နောက် စင်္ကာပူလာရင် တွေ့တာပေါ့နော်။ ကြိုးစားပါဟာ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ အကုန် တော်ကြပါတယ်။
Pinkgold on January 12, 2008 at 8:03 am said:
ဟုတ်ပါ့ ဒေါင်းဒေါင်းရေ ဦးသန်းရွှေတူမ ပန်းရွှေရေ ဆိုပြီးလာ ခေါ်တာ မမေ့ပါဘူးတဲ့ရှင်
နင်ပြောတော့ ငါ့အတွေးတွေ တိုးတက်လာတယ် ဆိုပါလား.. တိုးတက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူးအေ ငါအရင်ကလည်း ဒီလိုပါပဲ အတွေးတွေကို ချမပြတာပဲ ရှိတာပါဟာ..
ငါအဲလိုမျိုး အလုပ်လာလျှောက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို အားပေးပါတယ် ဒေါင်းဒေါင်းရေ.. ဒါပေမယ့် တစ်ချို့တွေက ပေါ့ပဲ ပေါ့နိုင်လွန်းတယ်.. အားမရဘူး..ငါကတော့ ဒီလိုလူတွေကို ဆယ်တန်းပြန်ဖြေဖို့ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရင် တက်လမ်းပွင့်လာ နိုင်ကြောင်းကို အမြဲအားပေးပါတယ် ပြောပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ငါက သူတို့တွေရဲ့ အုပ်ထိန်းသူမှ မဟုတ်တာလေ ရှေ့မှာ ဟုတ် ဟုတ် နဲ့ နောက်မှာ ရုတ်ရုတ် လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ပုံလို့ဟာကို.. တစ်ကယ်ကြိုးစားချင်တဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်.. မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်က စိတ်မပါတဲ့ သူမျိုးကို ပြောရတာ ကျတော့ အဖတ်မတင်ဘူး ဒေါင်းဒေါင်းရေ.. နင်လည်း သိမှာပါ
မျှားပြာ on January 12, 2008 at 9:48 am said:
အင်တာလာဗျုးခံပါတယ် အပေါ်ကမေးခါန်းတွေတော့ မမေးကြေး
ပို့စ် ၁၀၀ မြောက်မှသည် နောင်နောင်များစွာတိုင်
မင်းကျန်စစ်။ on January 13, 2008 at 2:24 am said:
နောက်ထပ် ပို့စ်လေး များစွာကို လက်ရာ ပြောမြောက်စွာ ရေးသား နိုင်ပါစေဗျာ။ မလာတာ ကြာပြီမို့ ခုတန်းပလိတ်လေးကို မြင်တော့ တော်တော်လေး သဘောကျမိတယ်။ အင်တာဗျူး အကြောင်း ရေးထားတာ ကြည့်ပြိး စေတနာ ထားတတ်တဲ့ စိတ်လေးကို မှန်းမိပါတယ်။ ဆိုက်ကား သမား အိမ်မက်မက်တဲ့ ဟာသလေးကိုလည်း ဖတ်ပြီး ခွိခွိ ဖြစ်သွားရသဗျ။ ဘာတဲ့… ကြိုက်ရာ sim card ရွေးပြိး ထုတ်ပြီးလို့ မော်ဒယ် ၂ပတ်လောက် အောက်သွားရင် အလကားရတယ်ဆိုတာ ။ ဟိဟိ အဂယ်ဖစ်လာမှာရားဟင် ။ ဘယ်နှရာစုနှစ်မှာလဲ ကျော။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ…
MgThaJan on January 13, 2008 at 4:47 am said:
ပို့စ် 100 မှသည် 1000 10000 အထိ ဆက်လက် အာားပေးနေပါမယ်ခင်ဗျာ 🙂
Zin Ko Latt on January 14, 2008 at 8:40 am said:
ပိုစ့်၁၀၀တောင် ရှိသွားပြီလား။ နောက်ပိုင်းလဲ ပိုစ့်လေးတွေ ဆက်ဆက်ပြီး တင်သွားနိုင်ပါစေ။
BarNyar on January 16, 2008 at 1:15 am said:
ဟဲ့.. ပိုးဂင်.. နောက်နေ့ ပိုစ့် 101 မြောက်ဟာတင်နော်.. =).. ပြန်လာရေးမယ်.. ကွိကွိ..
su wai on January 18, 2008 at 5:31 am said:
pinkgold ရေ…ပို့စ်တစ်ရာမြောက် အင်တာဗျူးအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးကို သဘောကျတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြုံရတာလေးတွေ ရေးပြတော့ သူများတွေလဲ သိရတာပေါ့…။ လူငယ်တွေ တကယ့်ကို ရည်မှန်းချက် ပျောက်နေကြတယ်နော်…။ အဲဒါ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမလဲဟင်…။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ခွင့်မရသေးရင်တောင် ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုးလေးတော့ ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်နော်…။
Cypher on January 21, 2008 at 10:08 am said:
ပန်းခရေဆီကနေ လင့်တွေ့လို့ လိုက်လာတာ။ အတော်လေး ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ပညာရေးကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့ လူငယ်တွေ အတော်များလာပါတယ်။ ပညာကို စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အပျော်အပါးတွေက ဆန်းဆန်းပြားပြား အမျိုးကိုစုံလို့ပါ။ ဒါတွေနောက်ကို လိုက်ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာ ပညာမတတ်လို့ လခ မကောင်းကြပေမယ့် လိုချင်တာရဖို့ ငွေလိုတဲ့အခါ အလွယ်လမ်းကို လိုက်ကြရင်း ဘ၀ပျက်ကြရပါတယ်။ မပင့်ဂိုးက မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဆိုတော့ လက်အောက်က မိန်းကလေးငယ်လေးတွေကို ဒီလို လမ်းမှားမရောက်ရအောင် ဆုံးမပေးနိုင်ရင်ပဲ တော်တော် ကုသိုလ်ရနေပါပြီ။